Yuu yahay Dhagaystayaasha Bartilmaameedkaagu? | Martech Zone
Yuu yahay Dhagaystayaasha Bartilmaameedkaagu?
Talaado, Juun 14, 2011 Arbacada, Oktoobar 16, 2013 Douglas Karr
Mid ka mid ah ismaandhaafaadka aasaasiga ah ee ku saabsan warbaahinta internetka ayaa ah aqoonsiga cidda bartilmaameedkaagu yahay. Dad aad u tiro badan ayaa diiradda saaraya bal in rajooyinkoodu jiraan iyo in kale. Toddobaadkan, waxaan la shaqeynay hal shirkad oo ka cawday in himiladiisa heerka C si fudud aysan u ahayn khadka tooska ah.
Kama doodi doono inay run tahay iyo in kale. Laakiin warbaahinta internetka waxay ka kooban yihiin dad badan oo kala duwan oo saameyn ku yeelan kara rajada heerka C isla markaana isaga hortiisa heli kara. Dhacdooyinka bulsheed waxay bixiyaan fursado. Isku xirka shabakadaha sida LinkedIn ayaa kugu soo dhowaanaya. Qoraallada Blogga, tixraaca bulshada iyo kuwa raacsan ayaa kaa caawinaya inaad sii waddo ku hareeraynta rajada oo aad u aragto shirkaddaada mid muuqata.
Tusaale ahaan, haddii shirkaddaadu raadineyso maalgashadeyaal bilow ah iyo ganacsato, markaa shirkadaha teknolojiyadda sare, IP iyo qareennada bilowga, iyo xisaabiyeyaasha bilowga waa dad weyn oo laga hor helo. Waxay leeyihiin xiriirro waxayna siiyaan shaandhada iyo ilaalinta himilooyinkaas. Iyaga la yaab iyaga oo waxaad hor imaan doontaa qofka aad u baahan tahay.
Markaad ka shaqeysid istiraatiijiyaddaada bulshada, ha isku mashquulin cidda booqdayaashu yihiin ama halka ay ka imaanayaan, waxaad xoogga saartaa haddii booqdayaashaasi ay kaa hadlayaan oo ay kuu keenayaan rajada! Xidhiidhka lala leeyahay saamileyaashaas iyo filtarada waa mid qiimo leh oo ay tahay inaadan iska indhatirin.
Boodcasting B2B 101
Isticmaalka Warbaahinta Bulshada ee Gobolka Mareykanka